China Precision Seamless Steel Pipe factory ary mpamatsy | XUANZE
Ny fantsom-by vy tsy misy fotony dia karazana fitaovana fantsom-by avo lenta aorian'ny fanaovana sary mangatsiaka na fitsaboana mihodina mafana. Satria tsy misy sosona oksida amin'ny rindrina anatiny sy ivelany misy fantsom-by, tsy misy fivoahan'ny tsindry mafy, avo lenta, avo lenta, tsy misy fihoarana amin'ny famolahana mangatsiaka.
Ny fantsom-by vy tsy misy fotony dia karazana fitaovana fantsom-by avo lenta aorian'ny fanaovana sary mangatsiaka na fitsaboana mihodina mafana. Satria tsy misy sosona oksida amin'ny rindrina anatiny sy ivelany misy fantsom-by, tsy misy fivoahana amin'ny tsindry avo, avo lenta, avo lenta, tsy misy fivoarana amin'ny famolahana mangatsiaka, mirehitra, manaparitaka ary tsy misy triatra, dia ampiasaina hamokarana vokatra avy amin'ny singa-pneumatika na hydraulic, toy ny varingarin'ny rivotra na varingarina misy menaka. Izy io dia be mpampiasa amin'ny fantsom-by vy, rafitra fantsom-by, fantsom-by vy, fantsom-by vy, fantsom-by vy, milina fanodinam-boaka EVA, fantsom-by ho an'ny milina fanapahana hydraulic, milina fanaovana kiraro, fitaovana hydraulic, Pipe menaka avo lenta, fantson-diloilo hydraulic, joint ferrule, joint pipa vy, milina fingotra, milina fanodinana, milina fanariana maty, milina fanaovana enjeniera, fantsom-by mahery setroka ho an'ny kamiao paompy beton, fiara fitondra fanadiovana, indostrian'ny fiara, indostrian'ny fanamboarana sambo, fanodinana vy, indostrian'ny tafika, motera diesel, motera fandorana anatiny, compresseur rivotra, milina fananganana, milina fambolena sy ala, dia afaka manolo tanteraka ny fantsom-by vy tsy misy fangarony mitovy amin'ny fenitra mitovy amin'izany.
1. Hafa tsara, mitahiry ny fihinanana ny asa sy ny fitaovana amin'ny milina.
2. Famaritana marobe sy ny sakany fampiharana.
3. Ny vokatra mangatsiaka mihodina manana avo lenta, avo lenta tsara ary mahitsy.
4. Ny savaivony anatiny amin'ny fantsom-by dia azo atao hexagon.
5. Ny fahombiazan'ny fantsom-by dia ambony ary matevina ny vy.
Fandehanan'ny fikorianan'ny fantsom-by:
Fantsom-baravarankely - Fanaraha-maso - fikolokoloana - Fanaraha-maso - Fanafanana - fanindronana - fitifirana «pickling» - fikolokoloana - fanosorana sy fanamainana ny rivotra - fikotrana mangatsiaka - fihenan'ny - fanapahana - fisavana - Fanaraha-maso - vokatra vita fonosana
Ny fantsom-boaloboka marina dia be mpampiasa amin'ny fiara, môtô, fiara elektrika, petrochemical, herinaratra elektrika, sambo, aerospace, fitaterana, singa pneumatika, fantsom-by vy tsy misy fantsom-boalavo antonony sy ambany ary azo ampiasaina amin'ny tanany vy, mitondra, hydraulic , fanodinana mekanika ary sehatra hafa
Mitsitsy ny fanjifana ny mpiasa sy ny fitaovana amin'ny milina
Famaritana marobe sy ny sakany fampiharana.
Avaratra savaivony: 13mm-73mm
Hatevin'ny rindrina: 1.5mm-10mm
Endriny mazava tsara
Ny savaivony anatiny amin'ny fantsom-by dia azo atao hexagon.
Kalitaon'ny velarana, Mahitsy.
Ny vokatra mangatsiaka mihodina manana avo lenta, avo lenta tsara ary mahitsy.
Sodina mangatsiaka milomano mangatsiaka
Previous: Sodina vy vita amin'ny rindrina mavesatra
Manaraka: Fanodinana fantsom-by